Iko Kushambadzira uye Kutengesa Kubatsira kweMushambadziro Wekushandisa | Martech Zone
NeChishanu, Gunyana 12, 2014 NeChishanu, Gunyana 12, 2014 Douglas Karr
Maererano ne CSO Kunzwisisa, makambani ane akura anotungamira chizvarwa uye manejimendi maitiro ane 9.3% yepamusoro yekutengesa chiyero chekuzadzisa chiyero. Apa ndipo panotengeswa michina yemapuratifomu sevatsigiri vedu pa Salesvue yakave nemhedzisiro inoshamisa mukuvandudza zvese kuripota uye kugona kwezvikwata zvinoshandisa Salesforce - ichipa kutarisira kune pombi otomatiki mhinduro. Hazvisi zvekutengesa otomatiki izvo zviri kubatsira vamiririri vekutengesa kuti vawedzere kugadzira uye kushanda, hazvo.
Kunyangwe iri kutengeswa kwemakore sechishandiso, zvakanaka, vashambadziri, otomatiki iri kuchinja chimiro chedhipatimendi rekutengesa zvazvino futi. Makambani anoshandisa mhinduro yezvikwata zvavo zvekushambadzira anokurumidza kuona kuti otomatiki anowedzera kupfuura miganho yekutengesa. Hauna kugutsikana? Kuwedzera kwequota kubudirira neinenge 10% haingori chete inowedzera yakawanda mari muhomwe dzako dzevatengesi, zvakare inoenda kure kure kuenzanisa kutengesa uye kushambadzira, uye inobatsira zvakanyanya mukubudirira kweiyo kambani yekutengesa kutenderera. Matt Wesson, Pardot
Kushambadzira otomatiki kunounza njere dzakakosha kuchikwata chako chekutengesa icho chinogona kubatsira mumiriri wekutengesa kuti anzwisise zvido zvemutengi. Vakanzwa sei nezve zvigadzirwa zvako nemasevhisi? Ndeapi data avakapa mumafomu ayo anotaura kune kwavo kukodzera semutungamiri? Ndeapi mazwi akakosha avakatsvaga pavakasvika panzvimbo iyi? Ndokufambidzana kupi kwavakaita kuburikidza nesocial media Ndeapi maemail avakanyorera? Ndeapi mapeji avakashanyira? Ndeapi mapepa evachena avakatora kana zviitiko zvavakanyoresa?
Rudzi urwu rwemashoko runogona kuve rwakakosha zvakakosha kune anomiririra wekutengesa kuti agadzirire yavo inotevera kufona kana email ine tarisiro. Unogona kana simbisa kukosha kwako kuburikidza nekutungamira zvibodzwa kutsvaga nekuvhara zvinotungamira izvo zvinowanzo kuve mutengi mukuru.
Tags: tungamira njerelead alamaruregereroMapaipi mhindurokutsvaga mhindurokutengesa kushandisa michinakutengesa dashibhodhiKugonesa Kugonesapombi yekutengesakutengesa kutsvagasalesforce appsalesforce automationmuzvideo
Transparency iri Sarudzo, Kuvimbika hakuna